galmada ugu kulul - iftineducation.com ≡Navigasi Menu
→ galmada ugu kulul
iftineducation.com - Magac dumar inkastoo lawada wadaago hadana karti iyo Dareen fudeed ayaa la is dheeryahay waqtiga Ijmaaca , hadaba Ragga oo la ogaaday ineey in badan aad ujecelyihiin Haweeneyda leh labadaan Tilmaamood kuwaasoon marnaba ilaawin .
Raggu waa kuwa jecel in waqtiga Gurmadka Baashaalka Sariirta gabadhu adeegsato hubkeeda qarsooodida ah kuwaasoo laga run sheego qaadashada Baashaalka Sariirta.
Waxaa wanaagsan in wiilku badanaa bilaabo weerarka gaadmada ahi kaasoo si waalan u istiimiyaha gabadha , warka.aduun.com balse waxay aad usii jecelyihiin in gabadhu ka run sheegto qaadashada raaxadaas ayna soo bandhigo Codadka kala gadisan ee Dhawaqa ka turjuma ineey Raaxada si wacan uqaadatay.
Gabadha oo dhawaqeeda soo bandhigtaa raggu dareen waalan ayeey kusii abuurtaa kuwaasoo niyeeysta in ay aad u qanciyeen gabadha , warka.aduun.com ayaad ka akhrineysaa , Niyada oo u dhisan ayeey si deganaan ku jirto u gutaan xaajadooda.
Sidoo kale waqtiga Baashaalka waxay si qarsoodi ah u eegaan Raggu indhaha gabadha waxaana gabadhu uwanaagsan ineey soo bandhigto karaar qaadashada Raaxada indhaha isku qab qabato iyadoo sii dareensiineysa Macaanida uu leeyahay Odoyga.
Hadaba Gabaryahay Raggu waxay ku dadaalaan qancintaada ee adiguna ku dadaal ka run sheegida Dareenkaga waana kuwa shaqada ay hayaan sii laba jibaaraya si aad dareen waalan u heshana had iyo jeer dhiira galintiisa ku dadaal